Marvel စူပါဟီးရိုးတွေရဲ့ဖန်တီးရှင် Stan Lee ကွယ်လွန်
အသက် ၉၅ နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Marvel စူပါဟီးရိုး ဇာတ်ကောင်များစွာကို အသက်သွင်းခဲ့သလို ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ ဇာတ်အိမ်တွေ ဖန်တီးရာမှာ အဓိကအကျဆုံးသူတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာကြီးဟာ အသက် ၉၅ နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော်စာရေးဆရာကြီး Stan Lee ဟာ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ မနက်အစောပိုင်းက လော့ဆန်းဂျလိစ်ရှိ Cedars-Sinai Medical Center တွင် ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ မိသားစုကို ကိုယ်စားပြုသူတစ်ဦးက The Hollywood Reporter ကို ပြောခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူဟာ Iron Man, Fantastic Four, Spider-Man, Daredevil နဲ့ X-Men အပါအဝင် နာမည်ကျော်ဇာတ်ကောင်တွေကို ပူးတွဲ ဖန်တီးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ Lee က Jack Kirby နဲ့ Steve Ditko တို့လို အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး စူပါဟီးရိုးတွေနဲ့ ကာတွန်းလောကကို အသက်ဝင်လာစေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Lee က စာရေးဆရာနဲ့ အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဇာတ်လမ်းပေါင်းများစွာကို ကြီးကြပ်ရသလို ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ စူပါဟီးရိုးဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Chris Evans အပါအဝင် ကာတွန်းနဲ့ ဟောလိဝုဒ်အသိုင်းအဝိုင်းက ှStan Lee ဆုံးပါးမှုအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ ရေးသားတာကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။
"နောက်ထပ် Stan Lee ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူက ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ လူငယ်တွေနဲ့ လူကြီးတွေကို စွန့်စားမှု၊ လွတ်မြောက်မှု၊ စိတ်သက်သာရာရမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ စိတ်တက်ကြွမှု၊ အားအင်ပြည့်ဝမှု၊ ခင်မင်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပေးခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ သူက ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ကြင်နာမှုကို ဖော်ပြခဲ့တယ်။ သူက ဘဝပေါင်းများစွာအတွက် ဖျက်မရတဲ့အမှတ်တစ်ခုကို ချန်ထားပေးသူဖြစ်မှာပါ..Excelsior!!" လို့ Chris Evan က တွစ်တာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Lee ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်ဟာ တော်တော်လေး ဂယက်ထန်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတုန်းက အသက် ၆၉ နှစ်အရွယ် ဇနီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ POW! Entertainment က အမှုဆောင်အရာရှိတွေကို ဒေါ်လာ ၁ ဘီလျံ လိမ်လည်မှုနဲ့ သူက တရားစွဲခဲ့ပြီး နောက်သတင်းပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာ အဲဒီအမှုကို ချက်ချင်းပြန် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူ့ရဲ့စီးပွားရေးမန်နေဂျာဟောင်းကိုလည်း တရားစွဲဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
2018 ဇွန်လမှာ သူ့ကို သက်ကြီးရွယ်အိုညှင်းပန်းမှုနဲ့ တိုင်ကြားမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက် လော့ဆန်းဂျလိစ်ရဲဌာနက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။